अर्थ/विकास Archives - Page 66 of 70 - Dna Nepal
कास्की जिससमा चोरी, सुरक्षा गार्डले चोरे पैसा २९ आश्विन २०७४, आईतवार ०५:३२
पोखरा, असोज २९ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीमा चोरी भएको छ । राजश्व शाखाको काण्टरबाट ३ लाख ७७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ चोरी भएको जिसस कास्कीले जनाएको छ । चोरीमा जिससकै सुरक्षा गार्ड डम्बरबहादुर गुरुङले पैसा चोरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ..
प्रकाश ढकाल पोखरा, असोज २९ । फूलको पर्वको रुपमा लिईने तिहारमा पोखरामा यसबर्ष ८० प्रतिशत फूल पोखरा आसपासबाटै आउने उनको अनुमा छ । ‘पछिल्लो समय कास्की र आसपासमा फूलखेति गर्ने किसानहरु निकै बढेका छन् । यस क्षेत्रमा फूलको ब्यापार केन्द्र नै पोखरा हो,..
फूलसँगै फूलेको परिवार
प्रकाश ढकाल पोखरा, असोज २९ । फूल बेचेर पैसा कमाउने ? त्यो पनि नेपालमा । फूलको संस्कार सुरु भएकै कति भयो र ? नेपालीहरुले तिहार बाहेक फूल चलाउने चलन अझैपनि धेरै ठाउँमा छैन । कसैले सौखले करेसाबारी सजाउन रोपेपनि फूलको ब्यापार गर्ने चलन भर्खरै चलेको हो..
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघमा भण्डारीको प्यानल
पोखरा, असोज २९ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा कृष्णहरि भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । संघको ११ औं महाधिवेशनले भण्डारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । भण्डारीले निकटतम प्रतिद्धन्द्धी इञ्जिनियर वसन्तमोहन भट्टराईलाई..
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा काम रोकियो
पोखरा, असोज २९ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनालाई सरकारले दिएको सबै रकम खर्च भैसकेको छ । सरकारले यो बर्षका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । धेरै आयोजनामा बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो सडकको बजेट समयमै खर्च भैसक्यो । नवलपरासीको..
पोखरामा २४ घण्टे ब्यवसाय चलाउन मापदण्ड बन्दै
पोखरा, असोज २५ । गृह मन्त्रालयले २४ सै घन्टा ब्यवसाय खोल्न पाउने निर्देशन जारी गरे पनि निर्देशिका अभावमा पूरानै अवस्थामा ब्यवसाय चलिरहेको छ । ११ बजेपछि पोखरामा होटल तथा रेष्टुरेण्ट पूरै सुनसान हुन्छन् । सँधै ब्यवसाय खोल्न पाउने गरी जिल्ला..
ठेकेदारको ठगी–अलपत्र काम, सरकार मौन २४ आश्विन २०७४, मंगलवार ०२:५६
भूकम्पपीडितलाई तीन लाख निर्ब्याजी ऋण
काठमाण्डौं, असोज २४ । सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई निर्ब्याजी ऋण दिने तयारी गरेको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडित परिवारलाई घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण दिने निर्णय गरेको हो । भूकम्पपीडितले घर बनाउन समस्या भएमा..
उड्ने ट्याक्सी पोखरा भित्रियो (भाडा कति लाग्छ ?) २३ आश्विन २०७४, सोमबार १७:३०
पोखरा, असोज २३ । अचम्म लाग्ला, ट्याक्सीमा पनि उड्ने ? प्रविधिको युग हो अचम्म नमान्नुस् । बरु ट्याक्सीमा उडेर पोखरा घुम्ने भए मौका नगुमाउनुस् । हेलिएयरले लाइट हेलिकप्टर (ट्याक्सी) मार्फत पोखरामा व्यवसायिक उडान सुरू गरिसकेको छ । गत साउनमा उडान..